Tag: kutsva | Martech Zone
Chitatu, September 1, 2010 China, Kurume 18, 2021 Douglas Karr
Iyo sainzi yemavara inonakidza, mumaonero angu. Vakuru vagadziri - vangave vari vemotokari, vekushongedza dzimba, graphic vagadziri, kana kunyange vashandisi vevashandisi vanonzwisisa kuomarara kwemavara uye kukosha kwawo. Kubva pavara pendi rakasarudzwa kuti rive nechokwadi chekuti rinopa kuwirirana - kune iwo chaiwo mavara anoshandiswa - ane chakakosha maitiro pane mushandisi maitiro. Ruvara runowedzera kuzivikanwa kwechiratidzo ne80%, zvichitungamira zvakananga kune kuvimba kwevatengi. Heano maitiro ekukanganisa maAmerican